မတ်လအတွင်းမှာပဲ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာအောင် FBSက လုပ်ဆောင်ပေးတော့မယ်
စိတ်ကူးအိပ်မက်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပစ္စည်းတစ်ခုရတာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲ ဒီအရာကိုရပြီးနောက် သင့်ဘဝအတွက် ဒီအရာနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုတဲ့အရာကမှသာ စိတ်ကူးအိပ်မက်ပါ. အခု မတ်လအတွင်းမှာပဲ သင့်အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာအောင် FBSက ကူညီဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်. သင့်အတွက် တကယ်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာတစ်ခုခုကို သေချာစဉ်းစားပြီး ပြောပြပေးလိုက်ပါ. တကယ်ဖြစ်လာစေမယ့်အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါတယ်!
အရိုးသားဆုံး စိတ်ကူးအဆန်းသစ်ဆုံးနဲ့ အလှပဆုံးသော အိပ်မက်တစ်ခုကို FBSအဖွဲ့က ရွေးချယ်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာပါ! သတိပေးချက်: လူတိုင်းက ငွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီးအရာတွေကိုပဲ ပြောကြမှာဖြစ်တာကြောင့် သူတို့နဲ့မတူတဲ့ အခြား ပိုပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေကို ပြောပြပေးပါ. မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စ်ိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ တောင်းဆိုချက်ဆန္ဒတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်နော်!
ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ:
သင့်ရဲ့ ပါစင်နယ်ဧရိယာရှိ ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာကိုသွားရောက်လိုက်ပါ
ယခုပို့စ်ကို သင်၏ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ရှယ်လိုက်ပါ
လင့်ခ်အတိုင်းသွားပါ ထိုပို့စ်အောက်ရှိ ကွန်းမန့်တွင် သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ရေးပေးလိုက်ပါ
မြန်မြန်လေး ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ. မိတ်တွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ အခုပြိုင်ပွဲအကြောင်းကို ဝေမျှပြောပြပေးလိုက်ပါ. အိပ်မက်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါ. FBSက သင့်တို့အိပ်မက်လမ်းခရီးဖြောင့်ဖြူးစေဖို့ လမ်းပြကြယ်လေးအဖြစ်နဲ့ ကူညီပေးပါရစေ!